Archive du 20200415
Mbola anaty loza ny firenena Niakatra ho 108 ny voan’ny coronavirus
Misy olona voatily vaovao miisa 2 mitondra ny tsimokaretina coronavirus, ka manome ny antontan’isa rehetra ho 108, araka ny tatitra mahazatra fanaon’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Guy Maxime Ralaiseheno “Ilay fanapahan-kevitra tara no fositra”
Vantaniko eto fa iny fanapahan-kevitra iny no nahatonga an’izao fidiran’ny coronavirus izao,
Jean Nirina HAFARI Olana ho an’ny filoha ireo ekipany sasany
Nivoaka tamin’ny fahanginana ny filoha nasionalin’ny fikambanana Hafari Malagasy manoloana ny fahasahiranana mianjady amin’ny mpiray tanindrazana amin’izao fotoanan’ny fihibohana izao,
Rivo Rakotovao Manahy fanaparam-pahefana sy fanodikodinana
Nitondra ny heviny mikasika ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana eto amin` ny firenena, ankilany, sy ny toe-draharaha eo amin` ny lafiny sosialy sy ara-toekarena nandritra izay telo herinandro fihiboahana izay,etsy andaniny,
Fandaharan'asan'ny filoha Malagasy Kianin'ny Afrikanina mafy
Tao anaty 2 minitra monja dia nahatafavoahan’ny mpahay lalàna sady mpanao famakafakana, Patrick Mboyo,
Andry Ratsivahiny "Aoka tsy ho tia kely isika"
An-jatony ireo fitarainana voaray eny amin'ny fiadidiana ny repoblika noho ny kiantrano an-trano amin'ny fizarana ny Vatsy Tsinjo.
"Laissez-Passer Covid-19" sandoka Mpamily roa voasambotry ny polisy
Tratran'ny Polisy avy ao amin'ny Compagnie Urbaine d'Intervention nitondra fiara ny mpamily miisa roa izay nampiasa "Laissez Passer Covid19"
Mpino Silamo Mety hankalaza Ramadany anaty fihibohana
Ny 24 aprily izao no hanomboka ny volan’ny Ramadany ho an’ireo mpino Silamo. Mety hankalaza izany ao anaty fihibohana noho izany izy ireo noho ity toe-draharaha ateraky ny Coronavirus ity.
Mba henoy ny hafa e
Resaka 3,7 tapitrisa dolara avy amin’ny rafitra misahana ny fahasalamana eo anivon’ny firenena mikambana ve sanatrian’izany no nanakana tsy hanidiana ny sisin-tany ara-potoana ka nanjary nahatonga ny ain’ny malagasy ho tandindomin-doza toy izao?
Atao Aro Tsimoka Aretina coronavirus Miara-miasa akaiky ny ketrika.com sy ny IMRA
Ny institutions IMRA dia nanambara fa nahita fanafody azo avy amin’ireo raokándro Malagasy sy ny zavamaniry ho fanamafisana ireo hery fiarovana amin’ny vatan’ny olombelona
Tahirim-bola iraisam-pirenena Anisan'ireo hahazo fanalefahana trosa i Madagasikara
Nanapa-kevitra ny filan-kevim-pitantanana avy eo anivon’ny tahirim-bola iraisam-pirenena na FMI ny 13 aprily teo fa hanalefaka avy hatrany ny trosana
Fandoavam-bola eny amin’ny Banky Mila mazava tsara ny anton'ny fanemorana
Ireo tena manana olana no tokony ho voakasiky ny fanemorana fandoavam-bola araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray teny amina banky nanaovana fanadihadiana.
Orinasa mpampindram-bola madinika Manadihady aloha vao manaiky fanemorana fandoavam-bola
Ireo manao asa tena no voa mafy ary tafiditra anaty krizy ankehitriny araka ny fanazavana voaray teny amina orinasa mpampindram-bola madinika iray.
Toliara Mpiasan'ny kaominina maro noroahana
Ankoatra ny valan'aretina coronavirus dia mamely ihany koa, hoy ny vaovao voaray avy any Toliara,
Ambohimitsinjo-ambohimanarina Rangahy iray tratra saika hamaky trano
Amin'ny 12 ora sy 20 mn alina ny Polisy eny amin'ny boriborintany fahaenina no nahazo antso fa misy lehilahy iray mihaodihaody tafiditra ao anatin'ny tanànan'olona etsy Ambohimitsinjo.
ISOTRY Ireo mpivarotra hani-masaka sisa tavela
Maro ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana manoloana ny ady amin’ny valan’aretina Covid-19, ka anisan’izany ny famerana ireo olona afaka mivarotra sy ny fotoana azo hivarotana.
Kaontera mandeha amin’ny fahana Manamaivana ny fahasahiranana
Ao anatin’ny fanatanterahana ny drafitra ara-tsosialy amin’ny hamehana ara-pahasalamana dia manamora ny fanefana ny faktioran-jiro sy rano ho an’ireo mpanjifany ny JIRAMA .
Fizarana fanampiana Mampiaka-peo ny eny ambany tanàna
Tanteraka amin'ny mponina eny Andavamamba ilay fitenenana hoe : niandry vasoka no sady nanantena tsy misy.
Mpanjaitra an-tsena Tsy misy intsony ny mpanjifa
Velon-taraina tanteraka ireo mpanjaitra an-tsena etsy Ambodin’Isotry amin’izao fotoana izao noho ny tsy fisian’ny mpanjifa.
Legioma sy voankazo Efa amidy "en ligne" ihany koa
Ankoatra ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro toy ny savony, ny siramamy, ny vary….
Vatsy ho an’ny mpanao gazety Fandraisana anarana aloha no vita omaly
Ny zoma lasa teo, mpanao gazety miisa 400 no nisitraka vatsy fanampiana avy amin` ny governoran` ny faritra Analamanga.
Vatsy tsinjo sy PAM Afangaron'ny olona fa noana izy
Tena sahirana ny olona ka raisiny ambangovangony ny tenin'ny filoha. Mizara fanomezana isam-pokontany ny fitondrana ka ny komity isaky ny vakim-paritra tarihin['ny sefony no manao izany.
Benenitra Kisoa 100 isan’andro no maty
Mirongatra ny aretina pesta kisoa, na ramoletaka, any amin’ny distrikan` i Benenitra.
Lanto Rakotomanga Ho saziana izay tratra manodinkodina ny Vatsy Tsinjo
Olona 7500 amin'ny 38 000 no efa nahazo ny Vatsy Tsinjo eny amin'ny boriborintany faharoa Antananarivo renivohitra hatry ny omaly.
Raokandro Malagasy Tena mandeha be ny tsena
Raha saika maina avokoa ny ankamaroan’ny tsena amin’izao noho ny fahasahiranana ateraky ny fihibohana dia mifanohitra amin’izay ny tsenan’ny mpivarotra tapa-kazo sy raokandro Malagasy.